true drugs /zu-ZA/tools-for-life/drugs/steps/why-people-take-drugs.html read 7 9 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/drugs_zu_ZA.jpg Izimpendulo Kwizidakamizwa
Kunesinyathelo esisodwa ngemuva Kohlelo lwe-Purification ukuze sithole ukululama okugcwele ezidakamizweni.
Inkululeko ephelele emiphumeleni eyonakalisayo yezidakamizwa idinga ukuthi umuntu abhekane nezithombe zengqondo ezivela ekuthatheni izidakamizwa. Uhlelo lwe-Purification lususa izinsalela zezidakamizwa ezigcina lezi zithombe zengqondo ziku-restimulation. Kepha izithombe zisekhona. Zingaba-restimulated ngemibono endaweni ezungeze umuntu futhi zibe nomphumela omubi kumuntu. Lokhu kungenzeka ngaphandle kokulawulwa kwakhe nangaphansi kokuqwashisa kwakhe. Kungamlimaza ngendlela engabonakali, ngesizathu esifihlekile kuye.
I-processing ebhekene nalezi zithombe ibizwa ngokuthi i-Drug Rundown. Ihanjiswa ngongcweti abaqeqeshiwe kakhulu kuma-Scientology yamaSonto kanye namaMishini.
I-rundown uchungechunge lwezinyathelo zokubamba ingxenye yempilo yomuntu noma ubunzima futhi enomphumela owaziwayo. Umphumela we-Drug Rundown ukukhululeka emiphumeleni elimazayo yezidakamizwa, utshwala kanye nemithi kanye nenkululeko kwisidingo sokuyithatha.
Imibono yomuntu kanye nokuqoshwa komkhathi obonakalayo lapho ekwizidakamizwa awunembile njengoba kuyinhlanganisela yemicimbi edlule, umcabango kanye nezehlakalo zangempela ezenzeka ngaleso sikhathi. Umuntu angaba nezithombe kusuka kokuhlangenwe nakho kwangaphambilini okuxubene nokuqonda isikhathi sakhe samanje. Ngakho ke inkumbulo yakhe kanye nekhono lakhe lokucabanga kokubili kungaphansi kakhulu kunokuba kufanele futhi okumele kube njalo.
I-Drug Rundown kusingatha ukusetshenziswa kwezidakamizwa okwedlule ngezindlela eziningi. Okokuqala, izinqubo ngqo zisetshenziselwa ukubhekana nokuhlangenwe nakho umuntu abe nakho ngenkathi edla izidakamizwa. Lokhu kukhulula ukunakwa okwabambelela kulokho okuhlangenwe nakho.
Lapho ukunakwa komuntu kukhululiwe ezenzakalweni ezedlule, uyakwazi ukuphatha impilo yakhe. Uzizwa ekhanya, enokuqonda okwandisiwe, ekwazi ukulawula impilo yakhe nezinto ezisezindaweni ezimzungezile, futhi uyakwazi ukwazana kahle nabanye.
Umuntu othathe izidakamizwa ubuye abe nemizwa eminingi engekho mnandi ngokomzimba, ngokomoya nangokomqondo ehlangene nayo. Ngesikhathi se-Drug Rundown uthola futhi ahlole umthombo walezi. Amandla ayingozi engqondweni axhumene nakho ayakhululwa.
Ekugcineni, umuntu, nge-processing, uyakwazi ukuthola isizathu sangempela esenza aqale ukusebenzisa izidakamizwa kwasekuqaleni. Umuntu waphendukela kwizidakamizwa ngesizathu—ukuhlupheka okuthile ngokomzimba noma ukuphelelwa yithemba. Ngakho ke inkinga yezidakamizwa ingeyokomoya. Lowo wayehlupheka ngandlela thile futhi izidakamizwa zaba yindlela yokunciphisa lokhu kuhlupheka.
Umuntu wabheka izidakamizwa, utshwala noma umuthi njengekhambi lemizwa noma izimo ezingafuneki—okungahlanganisa uhlu lwezinto ezingapheli kusuka ebuhlungwini bomzimba kuya ekukhathazekeni nasekuntulekeni kokuzethemba. Umuntu kufanele athole ukuthi yini eyayingalungile ngempela ngaphambilini kokuba izidakamizwa zibe yisixazululo noma “ukwelashwa” kwakhe.
Uma isizathu sokuthatha izidakamizwa okokuqala singatholakali, isidingo sokusebenzisa izidakamizwa noma umuthi noma utshwala siyahlala. I-processing kwi-Drug Rundown ayigcini ngokubhekana nemiphumela yezidakamizwa, kepha yenza umuntu akwazi ukuthola futhi asuse izimbangela ezamholela ekutheni azithathe. Ngokwenza lokhu kususa ngokuphelele noma yisiphi isifiso okungenzeka usenaso sokusebenzisa noma ancike kwizidakamizwa ngokuzayo.
I-Drug Rundown ibhekana futhi isingatha imizwa engafuneki umuntu ayenayo ngesikhathi futhi nangaphambi kokusebenzisa izidakamizwa, utshwala noma umuthi. Ngokuqedela le-process umuntu ukhululekile kunoma iyiphi imiphumela yezidakamizwa.
Ukululama ngokuphelele kokulimala kwengqondo nangokomoya kokusebenzisa izidakamizwa okwedlule kudinga zonke lezi zinyathelo.